Beddelaan MTS in MP4 hayo HD tayo leh MTS Best ka Converter on Mac / Win
Sida loo rogo ama MTS in MP4 on Mac / Win ilaalinta tayada-HD (Windows 10 ka mid ah)
Maalmahan, dad badan waxay door bidaan inay shot qaar ka mid ah video clips cabsi badan safarada ay, xisbi, iwm, in uu korka farxad ah. Si kastaba ha ahaatee, inta badan clips AVCHD video yihiin in MTS qaab kaas oo sida caadiga ah Windows XP. Waxaad si toos ah iyaga ka ciyaari kara iPod, iPhone, ama qaar ka mid ah ciyaartoyda kale ee mobile ilaa aad ka badalo MTS in MP4. Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa desktop ugu fiican iyo converters online MTS. Waxaad si fudud u bedeli karaan MTS si aad u MP4, qaab la isticmaalay caadiga ah muddo ku dhow kasta oo qalabka, ka dibna si fudud u ciyaaro aad videos meel kasta iyo waqti kasta.
Qeybta 1: Best Desktop MTS in Converter MP4
Qeybta 2: MTS Online in Converter MP4
Qeybta 3: Extended Knowlege u MTS iyo MP4
Taageerada diinta ama ka tiro balaadhan oo ah video iyo maqal ah qaabab, oo ay ku jiraan MTS, AVI, MP4, MKV, MOV, iwm
Si fudud ciyaari kasta oo video ah oo ku saabsan qalabka kala duwan la presets filaayo.
Video tayada outout High la AAN tayada khasaaro.
Beddelaan video xawaare ka xoogbadan, iyadoo ay keentay technology APEXTRANS ™.
Taageer Qaabka Media kasta
Waxaad isticmaali kartaa tan cajiib ah fududahay in la isticmaalo Converter MTS si loogu badalo MTS, AVI, MP4, MKV, iwm in mid ka mid ah qaababka aad u jeclaystay.
Iyadoo presets badan filaayo, waxaad si toos ah aaladaha aad u bedeli karaan, sida iPhone, iPad, Samsung, HTC, LG, iwm
Speed ​​Conversion la aamini karin
Just jiidi faylasha aad galay tan Converter MTS eegin tirada, waxaad ka heli doontaa faylka badaley in dhowr daqiiqo.
Iyadoo function awood video tafatirka, aad astaysto video ah acccording si aad u dhadhan.
Guide: Sida loo Isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate
Si loogu badalo files MTS in files MP4, waxaad u baahan tahay oo dhan waa in la helo MTS xirfadle in Converter MP4. Markaas waxaad tahay inay ku dhameysato video MTS in ay MP4 video diinta ilaalinta tayada video ka dib markii dhowr qasabno fudud awood. Halkan yimaado tallaabada hagitaan talaabo talaabo ah MTS video inay diinta ka MP4 video in Windows OS. Dadka isticmaala Mac, fadlan akhri halkan .
Tallaabada 1. Ku dar MTS video files si MTS in ay Converter MP4
Guji "Add Files" button image ku darto aad MTS video files, ama aad si toos ah u soo jiidi kartaa & hoos u video MTS faylasha liiska faylka. Tani files MTS in files MP4 Converter Windows kuu ogolaanaya in aad ku darto files dheeraad ah oo aad samaysaan diinta Dufcaddii waqti.
Tallaabada 2. Edit (goo, dalagga, saamayn, Cinwaan) MTS video files (Ikhtiyaar)
Haddii ay jirto baahi ah, oo aad wax ka bedel kartaa MTS video files adigoo riixaya "Edit" button image. Waxaad jar karo, dalagga, ku dar saamayn, watermark iyo Cinwaan in aad videos.
Jar: jiid labada sliders in ay doortaan qaybta aad rabto, ka dibna riix maqas icon iyo button OK. Sidaas, waxaad jari karaa clip kasta oo aadan rabin. Dalag: Jiid jeedi sanduuq qaab dhibcaha si ay u doortaan meel kasta oo shaashadda fiidiyow ah. Isla markiiba, video degaanka xulay weynaan doonaa suuqa kala Xiisaha Leh. Saamaynta: waxaad siisaa badan oo saamaynta qabow oo aad codsan kartaa in video ah. Watermark: Ku dar image ama text watermarks in la shakhsiyeeyo aad video. Cinwaan: darista files Cinwaan waa la heli karaa in barnaamijkan.
Tallaabada 3. Calan qaab MP4 wax soo saarka iyo badalo
Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka aad videos adigoo gujinaya button qalab image ah, si aad u hesho "Qaabka"> "Video"> MP4 ". Markaas waxaad riixi kartaa" Beddelaan "si loogu badalo file MTS in file MP4 isla markiiba.
Haddii kale, guji si aad u daawato video ah tutorial tallaabo-tallaabo hoos ku qoran.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo MTS in ay MP4 Video Converter for Windows
Qeybta 3: Aqoonta Extended u MTS iyo Qaabka MP4
MTS waa a-qeexidda sare MPEG, AVC, H.264 qaab video. Waa rikoorrada camera digital ama Advanced Video codec Qeexid Sare (AVCHD). Waxaa inta badan loo isticmaalaa by Sony, Canon, Panasonic, iwm MP4 waa qaab weelka loo isticmaalaa in lagu kaydiyo video, audio, iyo xogta subtitles ah. Tan iyo dukaamada sida Lugood isticmaalaa qaab weel, waxaa loo isticmaalaa la iPod iyo Playstation (PSP). Waxa uu noqdo qaab caan ah.
r Apple QuickTime Player
Microsoft Guuritaanka Picture Khubarada Group
Sida loo Beddelaan Panasonic MTS M2TS Files in qaab kasta
Sida loo Beddelaan Sony MTS M2TS Files in qaab kasta Sida loo Beddelaan Canon MTS M2TS Files in qaab kasta oo
Sida loo Download MP4 filimada ama videos for PSP, Android iwm
Sida loo Beddelaan M2TS in MPEG on Windows / Mac OS
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama MTS in MP4 on Mac / Win ilaalinta tayada-HD (Windows 10 ka mid ah)